आफूहरु अभिभावक बनेर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न डा. लोहनीको आग्रह – Nepal Japan
नेपाल जापान १४ मंसिर १६:३२
पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको एकदिन अघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टी अब नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरेर आफूहरु अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. लोहनीले राप्रपा अध्यक्षका उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्देनको समर्थन गर्दै नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने मौका दिन अर्का दुई अध्यक्षलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।
राप्रपाको अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । वर्तमान अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर जबराले चुनाव नलड्ने घोषणा गर्नुभएको छ भनेअर्का अध्यक्ष डा. लोहनीले लिङ्देनलाई समर्थन गर्नुभएको छ ।
यसैको औपचारिक जानकारी दिन मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष लोहनीले भन्नुभयो “म अन्य दुई अध्यक्षलाई पनि पार्टीको हितमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न र नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने मौका दिन अनुरोध गर्दछु ।”
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा दशकौंदेखि एकै नेतृत्वबाट चलिरहँदा पार्टीहरु गतिशील हुन नसकेको र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग पनि भैरहेका बेला प्रायःजसो पार्टीमा पुरानै नेतृत्वको निरन्तरताले गति लिइरहेको छ ।
केही दिनअघि नेकपा मालेको महाधिवेशन सकियो र सो पार्टी स्थापनाकालदेखि सिपी मैनालीकै नेतृत्वमा चलिरहेको छ । त्यस्तै नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी ओलीकै निरन्तरता हुनेमा शंका छैन ।
एमालेमा ओलीलाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयासमा डा. भीम रावलले चुनौति दिएर नयाँ सुरुवात गरेको भए पनि रावलले गुट खडा गरेको आरोप लगाउनेहरुको कमी छैन ।
राप्रपाका शीर्ष नेताहरु अभिभावकको भूमिकामा बसेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हो भने यो एउटा नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ । महाधिवेशन गर्न लागेको कांग्रेसका नेता, कार्यकर्तामा पनि नयाँ नेतत्व चयनका लागि हिम्मत मिल्नेछ ।